EDNA ADAN WALIIN WAL BARAA! fi JAALALA DHUGAA!Tamasgeen Axinaafuu Alamuu’tiin – Beekan Guluma Erena
EDNA ADAN WALIIN WAL BARAA! fi JAALALA DHUGAA!Tamasgeen Axinaafuu Alamuu’tiin	Beekan Erena
Education, General Category July 6, 2016OROMO
1. EDNA ADAN WALIIN WAL BARAA!
Edna Adan hundeesituufi Dayirektera “Hospitaala Haadholii Edna Adan” jedhamu kan magaalaa Hargeyisa, Somaaliyaatti argamuu yeroo taatuu mirga dhalaa namaafiis nama falmuun sochii gaarii taasistudha. Keessatuu waa’ee dhaqna qabaa dubartootaa cimsitee kan mormituu enna taatu baroota darban akka Ministeera dhimma alaa soomaliyaa taa’uun dubartii ishee duraa taatee hojjetee jirti.
Mucaa Doktora Fayyaa Soomaaliyaa kan taatee Edna Adan Magaalaa Hargeysaatti dhalatte. Yeroo ganna 17 taatuu manni barumsaa Ijjolee dubaraa irratti xiyyefate magaalaa Hargeysaatti banamee. Achitti baratoota keessafilamuun warra kaan barsiisaa waan turteef muxanoo argattee. Qormaataafille ennaa teessuu qofaatti dhiira irra adda bahuun kutaa kan biraa keessatti ennaa ta’uu yeroo jalqaabaaf Shammaraan Soomaaliyaa keessa Carraa barumsa namootnii yartuun akka addunyaatti argatan biyyaa Biriteeyiin nama mo’attedhaa. Ganna torba guutuu achitti waa’ee Fayyaa qo’attee. Yeroo gara biyyaatti deebituu dubbartii Soomaaliyaa Narsii taatee ishee jalqabaa dhimma da’uumsaa irratti oggesaa taateefi yeroo jalqabaaf konkolaataa ofte taatee.
Abjuu ishee Hospitaala Soomaaliyaatti ijaaruu kana isheen abjoochuu eegaltee bara 1980’ta keessa haa ta’uu malee walwaraansa waliinii yeroo sana biyyatti keessa jiruun dirqamuun biyya isheerra goodaantee. Dhaabbata Fayyaa Addunyaan (WHO) filatamtee bakkeewaan barbaachiisoo garaagaraa irra taa’uun yeroo hojjechaa turte dhagahammumaa qabduu fayyadamuun aadaa bodatti haafaa kan ta’ee kittaanaa dubartootaa dhabamsiisuu irratti hojjettetii. Leenjii biyyoota 22 baha Meditiraaniyaatti argamaaniif leenjiin waa’ee da’umsaa ilaalchisuun WHO’n akka kennamuu taasisteetti. Bara 1991_1997 tti bakka buutuu WHO Jibuutii ta’uun hojjetee jirtii.
Yeroo gara Soomaaliyaatti deebiitee qabeenyaa horatte hundaa gurguruun abjuu ishee irratti hojjechuutti kaatee. Sababaa waraanaa achiitti geggefamaa tureen bakkii tokkiitiin Hospitaalaaf nii ta’a jedhamee magaalaa Hargeeysaa keessa isheen yaadde bakka balfaa ta’ee agartee. Sababa kanaan Pirojektii ishee hanqinni maallaqaa utuu Hospitaalichaaf baaxiin hin hojjetamiin dhumee. Gargaarsaa dhaabbilee garaagarafi daldaaltoota irraa argatteen Hoospitaallichii Bitootessa 9, 2002 banamuun hojjiitti seenee. Amma akka biyyaalessaatti gahee olaanaa fayyaa mirkaneessu irratti gahee olaanaa taphachaa hospitaala jiru ennaa ta’uu abjuun ishee ammo eegumsaa fayyaa guutummaa soomaaliyaaf mirkaneessu irraatti hojjechaa jirtii.
Adaan amma Dooktora kabaajaaa ishii yuunivarsiitii Kilaarkii kan Masachusetsiitti argamuu irra argattetii. Yuniversiitii Taledootti ammo dhimmaa fayyaan beekamtiin kennameefi jira. Dhiibbileen addunyaa birooniis gochaa ishee kanaaf beekamtii barbaachisuu kennaniiruuf.
“Dubaartii cunqursaa gara carratti jijjirte” jedhamuus dandeessetti!
Waa akka irra baraanne shakkii hin qabu!
Naaf jiraadhaa, Horaa Bulaa!
Akka Tamasgeen Axinaafuun Afaan Oromoon isiniif dhihaatetti!
2. JAALALA DHUGAA!
Oduun keeniyaa dhagaahamtee maarsarittii tokko irratti maxxanfamee waanan argeef isin afeeruun fedhe.Hayyataan ana hordofaa. Warra afaan Ingiliziin dubbisuu barbaaddaniif hidhaa gara maarsarittichaatti geessu (madda barrefama kana) geessu niin eera.
Namichii umuriin isaa ganna 58 tti dubbartii ganna 64 dhoksaan hawwaa turee wajjiin Gaa’ela isaa raawwate jedha barruun kun. Dubbartii amma ganna 64 taate kana jaallachuu erga eegalee wagga 40 ol lakkobsiiseraa. Namnii kun akkas jedhaa “ Jaalala dhugaa barbaadanii argachuun waan laayyoo mitii. Keessattu ergan haadhamanaa kiyya ishee duraa amma addan baane ijjoolle gurguddatan lama irra qabu waliin walfudhee fi haadha manaa kiyya ishee lammataa ijoolle sadii anatti dhiisuun da’umsaa irratti duutee dhabeedha kan dubbin jaalala dhugaa argachuun akka cimu naaf galee”
Namnii kun dubbartii amma fuudhee kana kan inni bare yeroo isheen mana abbaa manaa obboleetti ishii ykn haadha warra eessuma isaa daawwachuuf gara bakka inni jiraatuu dhufaa turte akka ta’e dhugaa baha. Lamaan isaaniiyyu akkuma wal arganiin jaalala keessatti waaliif haa kufaniyyudha malee safuu hawwaasa soddachuun utuu wal hin beellamin keessa isaanitti walbarbaadaa akka turan eeru. Jaartiin ganna 64 okkisaa jedhamtuu kan jaarsa ganna 58 Ayikaa jedhamutti eerumtee yeroo waa’ee jaalala dhoksaa lamaan isaani giddu bara dheeraaf ture akkas jechuun dubbatti “ baay’ee ijjolle taanedha kan nuun wal beeknuu. Keessi keenya akka walbarbaaduus nii beekna. Garuu bara hamma kana al tokkofille fedhii jaalalaa waliin raawwachuuf hin carromne.”
Bara 1969 ji’a walbaraniitti ijjolee ganna 17 taatee nama kan biraatti eerumte Okisaan. Ayikon ammo haadha manaa isaa irra mucaa dhiira argate. Garuu mucaan isaa kun waggaa tokko booda boqotee. Yeroo kana ammo Ayeekoon eerumuun mana dhaabbatte jirtii. “ yeroon mucaa koo lammafaa ulfa turee reef ganna 20’n ture. Garuu rakkoo guddan gadameesa kiyya irratti waan uumameef mucaa dahee baachuuf hin milkoofnee” jetti Okisaan. Maatiin abbaa mana ishee mucaa isaanii haadha mana kan biraa waan fuusisaniif ga’ela ishee itti fufuu hin dandenyee.
Waggaa 20 booda akka carra ta’ee mandara tokko Ayikoo waliin jiraachuu waan eegalaniif Okisaan akka fira dhihootti yeroo yeroon dhaqxee dubbistiin ture. “Okisaan yeroo yeroon akka firaatti dhuftee nu dubbisti turtee. Jaartiin kiyya ishiin lammataa nama gaarii waan turteef kabajaan keessumeessittiin turtee” jedha Ayikoon yeroo dubbatu. Keessa isaattii yeroo kanayyuu baay’isee barbaadanii kan turee yeroo ta’uu mirri isaa kun ishii birralee akka jiru hin beeku ture. Yeroo Jaartiin isaa da’umsa irratti bara 2011 boqottu Ayikoon ijjoolle isaa kan kunnunsuuf firaaf olla inni qabu Oyikaa qofa turee. Garuu amma ammatti fedhii walii qabu malee jaalala isaanii dheebuu wal hin baanee.
“ Akkasumaan dhuftee uffata nuuf miicitee nyaata nuuf dalagdee galtee mana ishii bultii turee. Garuu bara 2015 yeroo harkii kiyya raammoo tuqxuun tuqamee lubbun ana keessa bahuuf kaatee ollaatu dhufee anaaf ijjoolee koof qaqqabe osoo hin taanee isheetuu naaf qaqqabe” jedha Ayikoon. “Yeroo isheen akka ergan fayyeeyuu ana gargaaruuf akka qophii taate naaf himtuu keessa kootuu isheen tuqamee” jechuun dhugaa bahaa. Yeroo kana akka isheen dhuftee isaaf ijjolee isaa kunuunsituu itti himuun ijjolee isaa akka kan ishee ta’aniitti akka ilaaltuu kan inni godheef kan isheen abbaa manaa isheen dhiitamtee baatee sababa dhala dhabuu ishii akka ta’ee waan beekuuf turee.
Oyikaaniinis Ayikoo’n kenna rabbiti jechuun fudhatte jirtii. Mana amantaa kiristaanaatti luba durdhaabbachuuf erga waadaa waliif seenanii boodaa caamsaa 1,2016 (ji’aa laamaan dura ta’uu isaatii) wal fudhanii. “Abbaa manaa kiyya waanan jaalladhuf sababa inni dhugaatii hin dhugneefii” jette dubbatii Oyikaan. Ayikooniis amma waan wal fuudhaniif maatii fi firoottan isaan walbarsiisaa jiraa.
Kan Afaan Oromootti hiikee Tamasgeen Axinaafuudhaa!
← DHAAMSAAFI GORSA GURGUDDAA- NAMA AADAA DUBBISAA GAARII QABUUF…Temesgen Atnafu Mulatu’TIIN
DUGDA DHIIRAA- Asoosammoota gaggabaaboo akka ajaa’ibaa-Daboo Al-Kush’ /Dabalaa Jireenyaatin – Dubbisaa, daddabarsaa, yaada kennaa…!!! →